MgHla's Diary (မောင်လှ ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ): November 2010
Posted by MgHla Mandalay at 11:27 am
Seminar on Web Content Management Systems @ MCPA
Posted by MgHla Mandalay at 2:57 pm
Date: 28.11.2010 (SUNDAY)
Venue: MeetingRoom, MCPA Mandalay.
အထက်ပါ Seminar တွင် ..... Web CMS အကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင်သာမက မြန်မာ WebSite များတွင်ပါ အသုံးများလာသော နာမည်ကြီး Joomla (Open source CMS ) ကို မိမိတို. PC သို.မဟုတ် Server များတွင် အလွယ် တင်ပုံတင်နည်း ၊ Design Templates ပြောင်းနည်း၊ Content (ဥပမာ သတင်း)များလွယ်ကူစွာတင်နိုင်ပုံ )၊ User တည်ဆောက်ပုံနှင့် Roles အသုံးဝင်မည်. အခြေခံ Front End, နှင့် BackEnd Control များ၊ အကြောင်း အပါအ၀င် ယခုမှ စတင် ထိတွေ. စမ်းသပ်မည်.သူများအတွက် Joomla အခြေခံ များကို Step by Step လက်တွေ.သရုပ်ပြ ရှင်းလင်းမည်ဖြစ်ပြီး ထပ်မံ Drupal CMS အခြေခံ တင်ပုံတင်နည်းများကိုပါ လက်တွေ.ပြသမည် ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Posted by MgHla Mandalay at 2:24 pm
My Labels: May Myo City, Pyin Oo Lwin, Myanmar, Burma, Photo
Posted by MgHla Mandalay at 11:05 am